SAWIRRO: Faah-faahinta Shilkii uu ku geeriyooday Antonio Reyes… (Halkee ku sii jeeday, Xawaare intee la eg buu ku socday, Yaase la saarnaa Gaariga?) – Gool FM
SAWIRRO: Faah-faahinta Shilkii uu ku geeriyooday Antonio Reyes… (Halkee ku sii jeeday, Xawaare intee la eg buu ku socday, Yaase la saarnaa Gaariga?)
Haaruun June 1, 2019
(Seville) 01 Juunyo 2019. Xidiggii hore ee xulka Spain iyo kooxda Arsenal, Jose Antonio Reyes oo qayb ka ahaa laacibiintii kooxda Gunners ee loo taag waayay ee iyagoo 49 kulan aan laga adkaanna ku guuleystay Horyaalka Ingiriiska xilli ciyaareedkii 2003/04 ayaa waxa uu maanta ku geeriyooday shil baabuur.
Reyes oo uu wehliyay wiil ina adeerkiis ahaa oo lagu magacaabo Jonathan oo 23 jir ahaa ayaa halkaa ku geeriyooday, halka qof saddexaad oo lagu magacaabo Juan Manuel Calderon uu dhaawac culus soo gaaray isagoo 60% gubtay, waxaana loola cararay Isbitaalka.
Waxaa xilligii uu shilkani dhacayay Reyes uu ku sii jeeday gurigiisa oo ay ku sugayeen xaaskiisa iyo saddex carruur ah oo uu dhalay, waxaase nasiib darro baabuurkii ay saarnaayeen oo ku socday 120mph uu khadka ka baxay, kaddibna uu holcay markii uu dab ka kacay.
Kooxaha gurmadka deg degga ah ayaa gaaray goobtii shilkaasi ka dhacay ee dariiqa A-376, waxaana halkaa lagu arkayay baabuurkii uu waday Reyes ee ahaa Mercedes oo gebi ahaanba gubtay.
Magaalada uu ka soo jeeday Reyes ee Utrera oo sidoo kale ah goobta uu ku dhashay ayaa laba maalmood u baroor diiqi doona xiddigoodii hore, halka dhammaan laacibiintii uu la soo ciyaaray ee kooxaha kala duwan ee caalamkuna ay tacsi u gudbiyeen qoyska Reyes.
Reyes iyo xaaskiisa Noelia Lopez ayaa aqal galay ama is-guursaday bishii June ee sanadkii 2017-kii.
Waxa uu ifka kaga tagay Reyes labo gabdhood oo uu dhalay oo la kala yiraahdo Noelia oo shan sano jir ah iyo Triana oo labo sano jir ah, xaaskiisa Noelia Lopez iyo wiilkiisa oo 11 sano jir ah kaasoo lagu magacaabo Jose Antonio Jr.
Daawo Sawirrada Kooxda Liverpool oo sare u qaaday koobka Horyaallada Yurub oo ay sugeysay muddo 14 sanadood ah
Mauricio Pochettino oo sharaxay dareenkiisa kaddib guuldaradii finalka Champions League